Suuqleyda iyo hal abuureyaashu waxay heli karaan waxoogaa xirfad ah markii ay ka hadlayaan geedi socodka. Tani waa inaysan layaab ku noqon. Si kastaba ha noqotee, waxaan u kireysanaa awooddooda inay noqdaan kuwo asal ah, male-awaal ah, iyo xitaa aan caadi ahayn. Waxaan dooneynaa inay si xor ah u fekeraan, oo ay naga saaraan wadada la garaacay, oo ay dhisaan nooc cusub oo ka dhex muuqda suuqa dadku ku badan yahay. Markaa kama noqon karno oo waxaan ka filan karnaa hal-abuurnimadeenna inay noqdaan kuwo si heer sare ah u qaabeysan, raacsan hannaanka u hoggaansan nidaamka
Mustaqbalka Fiidiyowga Mobilada iyo Raadinta waa kan!
Arbaco, Juun 15, 2009 Sabtida, Juun 12, 2014 Douglas Karr
Tani waa mid cajiib ah oo xiiso leh waana wax beddelaya ciyaarta suuqa moobiilka. Layar ayaa laga bilaabay Nederland. Duke Long wuxuu ii soo diray xiriiriye tikniyoolajiyaddan cusub… Layar waxay ugu magac dartay biraawsar xaqiiqda wareega ee kororka ah. Waxaan ugu yeeraa mustaqbalka! Layar waa codsi bilaash ah oo kujira taleefankaaga gacanta oo muujinaya waxa hareerahaaga kajira adoo soo bandhigaya waqtiga dhabta ah macluumaad dijitaal ah oo korka kajira runta iyadoo loo marayo kamaradda mobilkaaga. Layar